किन बढ्छ अचानक मुटुको चाल ? यस्ता छन् कारणहरु | Dinesh Khabar
किन बढ्छ अचानक मुटुको चाल ? यस्ता छन् कारणहरु
२०७६ फाल्गुन २, ०२:४३
मुटुको धड्कन छिटो–छिटो भयो भने वा अस्वभाविक धिमा भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन्। यसले गंभिर रोगको संकेत गर्छ। मुटुको चालमा गडबडी भएमा त्यसले फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, मस्तिष्कलाई समेत प्रभावित बनाउँन सक्छ।
सामान्य अवस्थमा मुटुको धड्कन रेट ६०–९० प्रति मिनेट हुन्छ। यदि हार्ट रेट बढेर एक सय बिट्स प्रति मिनेटभन्दा बढी भएमा त्यसलाई सामान्य मान्न सकिदैन। यदि हामी मुटुका रोगी छौ भने मुटुको विद्युतिय प्रणाली प्रभावित हुन्छ र धड्कन तिब्र हुन्छ।
यदि सामान्य अवस्थाका व्यक्ति छौं भने विद्युतिय संकेतमा खराबी भएर टेककार्डियाको समस्या भएको हुनसक्छ।
इनएप्रोप्रीएट साइनस टेककार्डिया
यो मुटु सम्बन्धित एक समस्या हो। टेककार्डिया, शरीरको सामान्य प्रतिक्रियाको हिस्सा हुनसक्छ। अक्सर चिन्ता, ज्वरो वा रक्तश्राव आदिको अवस्थामा मुटुको गति बढ्छ। अन्या अवस्थामा मुटुको चाल तिब्र भयो भने त्यसले थाइराइड वा हाइपरथाइराइडिज्मको संकेत गर्छ।
कहिले काहिँ निमोनिया हुँदा सास फेर्न समस्या हुन्छ, त्यसबेला पनि मुटुको चाल तिब्र हुन्छ।
टेककार्डिया साइनस र नन साइनस दुई प्रकारको हुन्छ । साइनस टेककार्डिया एप्रोप्रीऐट साइनस टेककार्डिया र इनएप्रोप्रोएट साइनस टेककार्डिया दुई प्रकारको हुन्छ।
यस्तो समस्यामा मुटुको चाल तिब्र हुने, छाती दुख्ने, थकान अनुभव हुने, पसिना आउने लक्षण देखापर्छ।
आइएसटीका रोगीले शारीरिक श्रम गर्नु हुँदैन। इनएप्रोप्रीएट साइनस टेककार्डिया लामो समयसम्म रहने समस्या हो। यसैले यसको उपचार क्रमिक रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएसटीको उपचार औषधी वा ओपन हार्ट सर्जरीद्वारा गर्न सकिन्छ । तर, ओपन हार्ट सर्जरीको अवस्था त्यती आएको देखिदैन ।
चिकित्सकले औषधीद्वारा नै यसको उपचार गर्दै आएका छन्। यदि इनएप्रोप्रीएट साइनस टेककार्डियाको कुनै लक्षण आफ्नो शरीरमा लगातार २४ घण्टासम्म रहेमा शरीरको चेकजाँच गराउनुपर्छ । चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ।
२०७६ चैत्र २२, ०२:३९
अब नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो चरणमा
धनगढी: धनगढीकी एक महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा पहिलोपल्ट कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणका बिरामी फेला परेकी छन्। … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र २२, ११:१७
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार नाघ्यो
अमेरिकामा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार नाघेको छ। जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्ममा अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या सात हजार एक सय ५२ … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र २१, ०७:३६
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पदाधिकारीलाई आज मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरी सबै किसिमका बिरामीको उपचारका कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिए … विस्तृतमा